Booliska Denmark oo raadinaya Soomaali loo heysto inuu dilay hooyadiis – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Copenhagen– Mareeg.com: Wararka ka imaanaya dalka Denmark ayaa sheegaya in wiil Soomaali ah oo toorrey ku dilay hooyadiis xaafd ku taallada caasimadda dalkaa ee Copenhagen.
Falkaan oo naxdin iyo argagax ku abuuray dadka ku nool xaafadda uu ka dhacay ayaa la sheegay inuu geystay wiil magaciisa lagu sheegay Fu’aad Maxamed oo 20 sano jir ah.
Guriga dilku ka dhacay ayaa ku nool hooyada la dilay iyo 6 ilmo ah oo ay dhashay, halka aabihii ilmaha dhalay la sheegay inuu dalka debadda uga maqnaa, waxaana hooyada la dilay da’deeda lagu sheegay ilaa 42 sano jir.
Gabar ay wada dhasheen wiilka ayaa markii la dilay hooyadeed uuna walaalkeed ka baxsaday guriga waxay gashay qolkii ay qaylada ka yeeraysay, halkaasoo ay ku aragtay hooyadeed oo dhiig badan uu ka baxay.
Booliiska magaalada Copenhagen ay billaabay baad-goobka goob wiilka Somaliga ah ee dilay hooyadiis. Iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in wiilka hooyadiis dilay madaxa looga jiray, inkastoo aanay booliisku taas sheegin.
Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu wiilkaas uu ahaa mid maskax ahaan aan caafimaad qabin oo maskaxiyana xanuunsan yahay, laakiin wararkaas lama xaqiijin.
Uhuru Kenyatta: Soomaalidu waxey doonayaan iney dalkeena ka dhigaan dalkooda oo kale